jeudi, 24 août 2017 22:32
Mahajanga: 35,07% ny taham-pahafahana bakalorea 2017
Nivoaka io tolakandro io nanerana ireo foibem-panadinana rehetra ny voka-panadinana bakalorea taty Mahajanga.
Toy ireo voka-panadinana tany amin’ireo Faritany hafa manerana an’ i Madagasikara, nihena ihany koa ny taham-pahafahana fanadinam-panjakana bakalorea ho an’ ny Faritanin’i Mahajanga tamin’ity taom-pianarana ity raha noharina tamin’ny taon-dasa, saingy tsy dia ambony loatra io fihenana io raha mitaha amin'ny any amin’ny faritra sasany satria 0,7%.
Raha ho an’ny fampianarana ankapobeny, 34,38% izany ary 55,80% kosa ho an’ ny fampianarana teknika.
jeudi, 24 août 2017 14:32
Mahajanga: Misesy ny lozam-pifamoivoizana
Olona roa, mpisipa no samy tsy mbola mahatsiaro tena eny amin'ny URGENCES Androva hatramin'izao vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy ireo. Ny maraina teo tokony ho tamin'ny 3 ora no nisehoan'ny loza teny amin'ny Pont FITIM. Moto iray no nidofotra tamin'ny andrinjiron'ny Jirama raha nidina tamin'ny fiolahana.
Potika tanteraka ilay moto raha naratra izy roa. Tsy fantatra mazava ny tena anton'ny loza satria ny andro rahateo mbola tena maizina tanteraka ary tsy mbola lera fivoahan'ny olona.
jeudi, 24 août 2017 14:17
Mahajanga: Tsy mitsitsy ny mpitaky hetra
Tapitra hatreo ny fampitandremana sy ny fampahatsiahivana ireo mpitatitra ny amin'ny fandoavana hetra tambatra aty Mahajanga. Hatramin'ny fiandohan'ny herinandro teo, nisy ny fidinana ifotony nataon'ny sampandraharaham-paritry ny hetra sy ny mpitandro ny filaminana nisava ny karatry ny mpandoa hetra, ary manararaotra ny fisavana ny licence ihany koa ny avy ao amin'ny sampandraharahan'ny fitaterana avy amin'ny Kaominina renivohitra Mahajanga.
Ny zavatra hita aloha, tsy mavitrika amin'ny fandoavana ny patanty ireo fitateram-bahoaka eto Mahajanga, na bus io na Bajaj. Porofon'izany, tao anatin'ny andro vitsy nanaovana ny hetsika, maro dia maro ireo nampidirina fourrière, noho ny resaka licence sy patanty tsy voahefa.
AFT Andavamamba: Roland RAPARIVO
Mikarakara varotra fampirantiana etsy amin’ny AFT Andavamamba ilay mapanao hosodoko Roland RAPARIVO izay amin’ny tena anarany hoe RAPARIVO RAMAHERINAIVO Roland.
Sary hosodoko manodidina ny 40 eo ho eo no harantiny eny, izay nanomboka omaly alarobia 23 aogositra ka tsy hifarana raha tsy ny 09 septambra ho avy izao.
Ity no fampirantiana farany ataon’ity andrarezin’ny kanto ity, izay efa nandritry ny 60 taona nilomanosana tao anatin’izany hosodoko izany.
83 taona izy amin’izao fotoana izao izay efa tany amin’ny 1957 tany no nanomboka nanao ity asa ity.
Ity hetsika ity moa dia tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha 70 taonan’ny Alliance Française de Tananarive na AFT.
jeudi, 24 août 2017 09:06
Bac: Toliara tsy miroro
Vao nahare ny maro fa nivaly ny Bac aty Toliara, dia nirohitra avokoa na tamin'ny 2 ora maraina aza hijery ny voka-panadinana.
Fantatra moa 45.99% tamin'ireo mpiadina no afaka tamin'izany.